अझै स्मार्ट बन्नु भएन ? | Janakpur Today
आजको दुनियाँमा तपाईँ अझै स्मार्ट बन्नु भएको छैन भने भोलिको इतिहासले तपाईँलाई गाली गर्नेछ । तपाईँको बोलीमा लोली मिलाउँदै जहिले नि मृदु मुस्कानसहित हरेक बोलीमा ताली पिट्ने सालीले पनि गाली गर्न बेर छैन । स्मार्ट नहुने मानिस पनि भिनाजु हुन सक्छ ? बरु अर्कैलाई भिनाजु भन्छु भन्लिन् साली नानीले । आजभोलि स्मार्ट नहुँदा ससुरालीको अपुताली पनि खाली खाली हुन्छ रे ।
धेरै चिन्तै लिनु पर्दैन । स्मार्ट बन्न कुनै गाह्रो पनि छैन ः जानुस् नजिकको मोबाइल मार्ट किन्नुस् एउटा र बन्नुस् स्मार्ट ।
हो, स्मार्ट बनाउन मोबाइलले स्टार्ट गर्छ । एउटै मोबाइलले भएभरको स्मार्ट बनाइदिन सक्छ । यो दुनियाँको आठौँ आश्चर्य हो । जो यसको सम्पर्कमा पुग्छ स्मार्ट भइहाल्छ, अमृत पिउने अमर भएजस्तै । छोयो कि भयो । दुनियाँमा अहिले जो जो नयाँ स्मार्ट छन्, ती सबै मोबाइलकै कारण सम्भव भएको हो । तपाईँको सहर अथवा गाउँ नै स्मार्ट बनिसकेको तपाईँ नाङ्गो आँखाले देख्न पाउनु हुन्न, स्मार्ट मोबाइलले नै बताउने छ, गाउँकै गाथा । एकदम सही हो, जब तपाईँको हातमा एउटा स्मार्ट मोबाइल पर्छ तब तपाईँ आफै स्मार्ट । जुन कम्पनीको मोबाइल छ, सोही कम्पनीको स्मार्ट हुँदैन । तपाईँलाई कस्तो किसिमको स्मार्ट बन्नु छ, त्यो तपाईँको प्रतिभाले देखाउँछ । तपाईँको प्रतिभा देश र दुनियाँले देख्छन् । तर पहिलो नजरमै स्मार्ट बनिहाल्न सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको पहिलो फोटो नै स्मार्ट हुनु अनिवार्य छ । भित्र गिलो हिलो भए पनि माथिबाट पानीदार र चिप्लिने मार्बलले टालेको चमकदार सडक निर्माण भएर टिलिक्क टल्किन्छ, त्यस्तो टिलिक्क टल्किने र आँखा मिलिक्क हुने झिल्के स्मार्ट फोटोको अवतरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अलि पछि बाहिर हेर्दा खाउँ खाउँ लाग्ने चित्ताकर्षक आँप र स्याउ भित्रभित्रै कुहिएर स्याउँ स्याउँ कीरा परेको देख्नु भएकै छ, हो गिदी र गुदी नभए पनि कुनै बेला दार्शनिक बनेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा उद्घाटन गर्नुहोला । स्मार्ट मोबाइलले तपाईँलाई स्मार्ट दार्शनिक, स्मार्ट गायक, स्मार्ट कवि सबै बनाइदिन्छ । तपाईँलाई जीवनमा के के बन्न मन लागेको थियो ? ती बन्न वा भन्न नपाएको सारा तिर्सना स्मार्ट बनेपछि पूरा हुन्छ । यसैले स्मार्ट मोबाइललाई मैले स्मार्ट कल्पवृक्ष नामकरण गरेको छु । तपाईँ आफूलाई स्मार्ट मोबाइलमा कल्पना गर्नुस्, यसले तत्काल पूरा गरिदिन्छ :
मोबाइलमै छ सबै चिज खोजे पाइन्छ तुरुन्त स्मार्टले मात्र पाउने यो सृष्टिको आदि अन्त ।
अझै पनि चित्त बुझेको छैन ? तपाईँको चित्तसित मित लगाउने स्मार्ट मोबाइलका केही अद्भूत फाइदा देखेपछि त्यही चित्त तीन चित्त खान्छ । अहिले नै स्मार्ट बन्नु भएन भने पछि पछुताउनु पर्ला । हेर्नुहोस् स्मार्टका केही फाइदाहरू :
जब तपाईँ स्मार्ट बन्नुहुनेछ तब बिना काम लखर लखर कतै हिँड्नु पर्दैन । तपाईँको समयको पूरापूर उपयोग हुनेछ । एक दिनमा चौबिस घन्टा कम लाग्न थाल्नेछ । साथीसंगीका बीच बस्दा पनि एकातिर बोल्दै अर्कोतिर मनको कुरा खोल्दै गर्न पाइन्छ । कुनै पनि बेला खाली बस्न पाइँदैन । कुनै कुनै समय त यस्तो लाग्न थाल्छ कि दशमुख भएको रावणजस्तै दशतिर एकसाथ कुराकानी गर्न सक्छु । दशतिर दशथरिको कुरा गर्न सक्षम बनाउँछ । मैसेन्जरमा चार जनासित एकैसाथ मैसेज लेखेर, धार्मिक सिरियलका भगवानहरूजस्तै ग्रुपमा वा एक्लाएक्लै प्रकट भएर, नम्बरमा सुमधुर आवाजसित आदि जसरी मन लाग्छ बक्न पाइन्छ । अझ एक्लै भएको बेला झन् व्यस्त बनाउँछ । दिनको उज्यालोदेखि रातको अँध्यारोसम्म जहाँ जे र जस्तो सामग्री चाहिन्छ, स्मार्ट फोनले दिन्छ । तािईँको सामग्री ग्रहण गर्छ पनि । कोही कसैसित दशकौँ अघि विछोड भएको सम्झना नभए पनि यसले गराउँछ । सम्पर्क पनि गराउँछ । तपाईँको मनमा केही नभए पनि यसले प्रश्न सोधिरहन्छ ः ह्वाट इज अन योर माइन्ड, … ? बस्, यसको उत्तर दिँदै जानुस्, स्मार्ट बन्दै जानुस् । प्रश्नको उत्तर दिनै नसक्ने होइन ! तपाईँ जति प्रश्न आउँछ उत्तर दिँदै जानुहोस्, संसारको सबैभन्दा स्मार्ट बन्नु भएन भने मलाई भन्नुहोला । ह्वाट इज अन योर माइन्ड, … ? जम्मा एक प्रश्नको निरन्तर उत्तर दिएर यदि यो प्रश्न सकिन्छ भने विश्वका सारा रेकर्ड तपाईँको नाममा आउन बेर छैन । अझ मलाई के विश्वास छ भने जति जति स्मार्ट बन्दै जानुहुनेछ उति उति समयको अभाव हुँदै जानेछ जसले गर्दा एक दिनमा चौबिस घन्टा निकै कम लाग्न थाल्नेछ र एक दिनको चौबिस घन्टालाई बढाउनको लागि सरकारलाई दबाब दिन थाल्नु हुनेछ । उस्तै परे एक दिनको चौबिस घन्टालाई बढाएर कम्तीमा तीस घन्टा पु¥याउन सडक आन्दोलन गर्न बेर लाग्ने छैन । स्मार्ट मानिसलाई समय नै राक्षस लागिरहेको छ किनभने समय अपुग भइरहेको छ । हरेक मानिसलाई व्यस्त बनाएको छ । वास्तवमा व्यस्तताको अर्को नाम नै स्मार्ट हो । जो जति धेरै स्मार्ट ऊ त्यत्ति धेरै व्यस्त । र, स्मार्ट मोबाइल बोक्ने कस्सैलाई पनि फुर्सद छैन । जो स्मार्ट छ ऊ बेफुर्सदी छ र जो बेफुर्सदी छ ऊ स्मार्ट छ । यसै कारण पहिले जजसले जुन देउतालाई पूजा गरे पनि अहिले स्मार्ट देवता, मोबाइल देवता नै इस्ट देवता, ग्राम देवता र गृह देवता बनेको छ । सबै जात, धर्म, सम्प्रदाय तथा समुदायका मानिसले बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म मोबाइलको दर्शन गर्दछन् । स्मार्ट मोबाइलको स्क्रिन हेर्दै निदाउँछन् र त्यही स्क्रिन हेर्दै ब्युँझन्छन् । कतिपय त जीवनको अन्तिम आँखा चिम्लाइलाई पनि स्मार्ट बनाउँछन् ।
आँखाको दृष्टिशक्ति होओस् चाहे दिमागको दृष्टिकोण शक्ति होओस्, दुवैको असली उपयोग स्मार्ट मोबाइलले गर्दछ । उपयोग नगर्दा दुवै खेर जाने हुन्छन् । आजभोलि बालबालिकाहरूलाई नै हेर्नुहोस् न, स्मार्ट मोबाइलको उपयोग गर्दछन् । समय बितेको पत्तै हुँदैन । दृष्टि र दिमाग दुवैको बाल्यावस्थामै भरपूर उपयोग गर्दछन् । अनि त हजुरबाको अगाडि आँखामा स्मार्ट चस्मा लगाएर झन् स्मार्ट बन्न पाएका छन् । कुनै हिसाब होओस् कि सानोतिनो घरायसी समस्या, हजुरबाले केही सोध्दा तुरुन्त स्मार्ट फोनबाट जबाब दिइहाल्छन् । हजुरबाको नाम पनि उही स्मार्ट फोनमै पढेर बताउने बालबालिकाहरूमा गज्जबको क्षमताको विकास भएको छ । पहिले पहिले हजुरबा बालख हुँदा र अहिले नाती बालख हुँदामा तुलना गर्नुस् त को कति कसरी स्मार्ट छन् ? स्मार्ट फोनको अत्यधिक उपयोगले आँखालाई पनि स्मार्ट बनाउँछ ।
एक्लै हुन नदिन
स्मार्ट मोबाइल हातमा हुने कहिल्यै एक्लै भएको महसुस गर्न सक्दैनन् । जसरी धार्मिक क्षेत्रका मानिसहरू जहाँ भए पनि ईश्वर साथ हुन्छन् भन्दछन् । बोतलसेवीहरूको प्रोत्साहनको लागि जसरी पहिले लेखिएको हुन्थ्यो ः तपाईँ जहाँ भए पनि …… । यसरी जहाँ र जुनसुकै अवस्था स्मार्ट मोबाइलले साथ दिइरहेको हुन्छ । यो स्मार्ट साथी हो, समय कटाउने स्मार्ट सारथी हो । यसले सयौँलाई तपाईँलाई लाइक गर्न लगाउँछ । वास्तिवक जीवनमा कसैले लाइक नगरे पनि स्मार्ट सञ्जालमा हर दिन सयौँले लाइक गर्छन् । फलो गर्छन् । कमेन्ट गर्छन् । तपाईँ जहाँ भए पनि फोटो, स्टेटस र भिडियोले तपाईँको मनलाई रंगीन साँझझैँ रमाइलो बनाइरहन सक्छ । लाइक र कमेन्ट गरेर कहिल्यै थकान महसुस हुन दिँदैन । कहीँ पनि र कहिल्यै पनि एक्लै किन हुन दिँदैन भने स्मार्ट फोनमा जहिले र जहाँ पनि उपस्थित हुन्छन् ः
सारीवाललाई दाह्रीवाल र दाह्रीवाललाई सारीवाल तिन धर्के साधु पनि हुन्छन् यहाँ स्मार्ट नारीवाल । सबै आफन्त हुन
जब तपाईँ स्मार्ट बन्नुहुन्छ तब संसारका सबै स्मार्ट तपाईँको पहुँचमा हुन्छन् । तपाईँ सबै स्मार्टको पहुँचमा पुग्नुहुन्छ । तपाईँ स्मार्ट संसारमा परिचित हुन पाउनुहुन्छ । आफन्तहरूले अनुरोध पठाइरहन्छन्, तपाईँ पनि आफन्त बनाउन पाउनुहुन्छ । आफन्तलोक यति व्यापक हुन्छ कि को कुन ग्रहमा छन्, सबै थाहा हुन पाउँछ । स्मार्ट फोनले सबैलाई स्मार्ट बनाउने भएपछि तपाईँ आफू पनि स्मार्ट बन्नु हुनेछ । जसरी कोही एक्लै जन्मन्छ तर उसले आफूलाई अनेक नातामा पाउँछ त्यसरी जब तपाईँ स्मार्ट बन्नुहुनेछ तब तपाईँ एकै जना अनेक स्मार्ट बन्नुहुनेछ । तपाईँ स्मार्ट पिता वा माता, स्मार्ट पत्नी वा पति, स्मार्ट साली वा भिनाजु, स्मार्ट फुपू वा फुपाजु, स्मार्ट छोरा वा छोरी तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यहीँ बन्न पाउनुहुनेछ । आफूलाई स्मार्ट दुनियाँको सदस्य भन्न पाउनुहुनेछ । जब तपाईँ स्माटै बन्न पाउनु हुन्छ तब तपाईँको समय स्मार्ट हुन्छ, तपाईँको काम स्मार्ट हुन्छ र तपाईँको नाम पनि स्मार्ट हुन्छ । तपाईँका आफन्त स्मार्ट हुन्छन् । संसारलाई स्मार्ट बनाउन तपाईँको भूमिका पनि स्मार्ट हुन पुग्छ । र जब कुनै चाडपर्व आउँछ तब शुभकामनाको लाइन लाग्छ । एक दुई दिन पहिलेदेखि शुभकामना दिनेहरू हुन्छन् र एक दुई दिन पछिसम्म पनि शुभकामना आइरहन्छ । तपाईँको जन्मदिन होस् कि मरण दिन, विवाह दिवस होओस् कि सहिद दिवस, नयाँ वर्ष रहोस् कि खाना दिवस, दिसापिसाब दिवसमा पनि अनेक शुभकामना तथा बधाई पाउनुहुन्छ । घरमा छाना हाले पनि, जिउमा नाना हाले पनि, मनमा गाना फले पनि, थालमा खाना फले पनि, गालामा चड्कन परे पनि, दिलमा धड्कन बढे पनि सबैको शुभकामना र बधाईको बाढीले तपाईँलाई आनन्दको गंगामा बगाउँदै समुद्रसम्म पु¥याउँछ । तालुमा आलु फले पनि बधाई र छेरपटे लागेर जीउ गले पनि बधाई ।
स्मार्ट फोनले तपाइँलाई नाइटमा, डाइटमा र फाइटमा पनि स्मार्ट बनाउँछ । जहाँ डार्क पुग्छ त्यहाँ स्मार्ट पुग्छ अर्थात् पहिले जहाँ रवि पुग्दैन त्यहाँ कवि पुग्छ भन्दथे तर अहिले स्मार्ट म्यान पुगिरहेको छ । तपाईँ नाउँ, गाउँ र ठाउँ स्मार्ट बन्छ । तपाईँको मान र शान बढाउँछ । तपाईँले सुन्नु भएको होला ः मानिसले बिगारेको मोबाइल बन्छ तर मोबाइलले बिगारेको मान्छे बन्दैन । स्मार्ट मानिसका विरोधीहरू जो पुरातन संस्कृतिका जडसूत्रवादीहरू हुन्, तिनीहरूले यस प्रकारका बकम्फुसे अफवाह फैलाएका हुन् । बाँदरले आफ्नो घर बनाउँदैन र अरुको घरलाई पनि भत्काउँछ भनेजस्तै हो । बाँदरको जीउमा आएको खटिरालाई कन्याउँदा कन्याउँदै विशाल घाउ बनाउँछ भनेजस्तै कतै केही नपाएर स्मार्ट मानिसको विरोधमा कन्याएको खटिरो मात्र हो । मलाई के विश्वास छ भने स्मार्ट मोबाइल नबोके पनि यही लेख पढेर तपाईँ स्मार्ट बन्नु भयो । कि अझै पनि स्मार्ट बन्नु भएन ।
वन कार्यालयको अनियमितता छानवीनको माग